Corona Virus » COVID-19
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 20, 2021 .2mins read
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးရင်ရော ဘာတွေ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုဦးမလဲ……
Hybrid immunity ဆိုတာ ဘာများလဲ......... Hybrid immunity ဆိုတာကတော့ သိပ်မရင်းနှီးတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိုယ်ခံအားအမျိုးအစားက......
အခြေခံကျန်းမာရေး, အခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ စက်တင်ဘာ 15, 2021 .2mins read
ကိုဗစ်မဟုတ်တဲ့ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင် ကို ကျစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ ကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင်ကို ကျစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ ...။
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စက်တင်ဘာ 10, 2021 .2mins read